သင့် iPhone ၏ဘက်ထရီမရှိသောနောက်ဆုံးတည်နေရာကိုမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
ဖြစ်နိုင်ခြေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းတည်နေရာ Find my iPhone function ကိုသုံးခြင်းကပြoneနာတစ်ခုထက်ပိုပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်။ အခြားပစ္စည်းတစ်ခု၏တည်နေရာကိုခိုးယူလျှင်၊ ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်၎င်း၏တည်နေရာကိုအသုံးပြုခြင်းက၎င်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှင့်အနီးစပ်ဆုံးတည်နေရာကိုသိရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။
iOS device ၏တည်နေရာအတိအကျကိုသိရန်၎င်းသည်နေရာမှန်ကိုအချိန်နှင့်အမျှပေးပို့နိုင်သည့်ဘက်ထရီတစ်ခုလိုအပ်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်က၊ အကယ်၍ သင်ဟာဘက်ထရီကုန်သွားပြီဆိုရင် Find My iPhone လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် iOS ကစက်ရဲ့နောက်ဆုံးတည်နေရာကိုအမြဲတမ်းလက်လှမ်းမီနိုင်အောင်ပို့ပေးနိုင်တယ်။ ပင်ပြီးသားချွတ် terminal ကိုအတူ.
1 နောက်ဆုံး iPhone တည်နေရာကိုပို့ပါ
2 iPhone ရဲ့နောက်ဆုံးအနေအထားကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ
2.1 Apple Search အက်ပ်ဖြင့်
2.2 iCloud.com မှတစ်ဆင့်
4 iPhone ရဲ့နောက်ဆုံးတည်နေရာကိုတွေ့လား။
5 iPhone ကိုပိတ်ထားရင်တောင်ရှာလို့ရမလား။ ဖြစ်နိုင်လျှင် iOS 13 ကိုအသုံးပြုပါ
5.1 "Offline Find" မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
နောက်ဆုံး iPhone တည်နေရာကိုပို့ပါ
အစဉ်အဆက်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် iPhone အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူသည့်အခါတိုင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သော iOS ၏မူကွဲအသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုပြန်ယူသောအခါတိုင်း Find My iPhone ကိုဖွင့်ပါကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအချိန်မရွေးရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်ဘက်ထရီကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာ iPhone ရဲ့တည်နေရာကိုသိအောင်လုပ်ပေးတဲ့ function ပုံမှန်အားဖြင့် activated မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်မရွေးနေရာချထားရန်ခွင့်ပြုသည့်ကဏ္ the နှင့်တူညီသောကဏ္inတွင်ရှိနေသော်လည်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone ကိုလိုချင်ရင် သင့်ဘက်ထရီကုန်မသွားခင်သင့်တည်နေရာကိုတင်ပြပါ ကျနော်တို့အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမည်:
ပထမဆုံး iOS configuration options ကိုသွားတယ် setting များကို.
ချိန်ညှိချက်များအတွင်း၊ ကိုနှိပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iCloud အကောင့်, menu ရဲ့ထိပ်မှာပုံပေါ်ပါတယ်။
ထိုအခါငါတို့သည်ထို option ကိုရှာပါ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါ ကျနော်တို့ switch ကို activated နောက်ဆုံးတည်နေရာပို့ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏လက်ရှိတည်နေရာနှင့်ဘက်ထရီကုန်သွားသည်အထိမှတ်ပုံတင်ထားသောနောက်ဆုံးတည်နေရာကိုရယူရန်၊ အကယ်၍ ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ activate လုပ်ခဲ့လျှင်၊ ယခင်အပိုင်းတွင်ရှင်းပြထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်.
Apple Search အက်ပ်ဖြင့်
App Store တွင်ရရှိနိုင်သည့်ရှာဖွေခြင်းလျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်၏ iCloud အကောင့်၏အချက်အလက်များကိုထည့်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏တည်နေရာကိုသိပါ ၎င်းသည်ဘက်ထရီကုန်သွားလျှင်နောက်ဆုံးတည်နေရာကိုဖွင့်ထားသည့်နေရာသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးတွင်သိသောနေရာတွင်ဖြစ်သည်။
Find my iPhone function ကို activate မလုပ်ဘူးဆိုရင် text နဲ့အတူ device ရဲ့ name ကိုပဲတွေ့ရလိမ့်မယ် ဆက်သွယ်မှုမရှိပဲ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဘက်ထရီမရှိလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစာကိုပြလိမ့်မည် နောက်ဆုံးတည်နေရာ ကိရိယာအမည်ဘေးတွင်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါအခမဲ့
သင့်ရဲ့ device ကို iOS 13 ကစီမံတယ်ဆိုရင်, Find My iPhone application ကို download လုပ်စရာမလိုပါApple သည်၎င်းကို iOS သုံးဆယ့်ဗားရှင်းနှင့်လိုက်ဖက်သောပစ္စည်းအားလုံးတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ Find My iPhone ဟုခေါ်ခံရမည့်အစား၎င်းကိုခေါ်သည် ရှာပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌အခြားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုလက်ကိုင်ထားခြင်းမရှိပါက iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch ဖြစ်ပါက Apple က iCloud.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားရရှိနိုင်စေသည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ၏တည်နေရာကိုသာဆက်သွယ်ပါ Find function ကိုအသုံးပြုခြင်း။
ဒီ function ကကျွန်တော်တို့ကိုပြလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်နဲ့ဆက်စပ်အားလုံးထုတ်ကုန် သင်၏လက်ရှိသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားသောတည်နေရာနှင့်အတူဘက္ထရီမကုန်မီသို့မဟုတ်တွေ့ရှိ / အခိုးခံရသည့်ကိရိယာဖြင့်မပိတ်မီ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျောက်ဆုံးသွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့စက်၏တည်နေရာကိုသိရန်ခွင့်ပြုသည့်ဤထူးခြားသော iOS လုပ်ဆောင်ချက်ကိုခံစားနိုင်ရန်လိုအပ်ချက်တစ်ခုတည်းရှိသည်။ Find My iPhone ကို enable လုပ်ပါ ကိရိယာပေါ်မှာ။
ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မဖွင့်လျှင်၊ ခြေရာခံရန်မဖြစ်နိုင် အဝေးကနေမဖွင့်နိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏တည်နေရာ, clueless အသုံးပြုသူများအတွက်လက်ကိုပေးအပ်ရန်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သည်ဘက်ထရီကုန်သွားပြီသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်ပိတ်ထားပါက Apple ၏တည်နေရာ ၀ န်ဆောင်မှုသည်၎င်းကိုထပ်တူပုံစံမျိုးဖြင့်စဉ်းစားနိုင်သည် terminal ကို၎င်းကိုပိတ်ထားခြင်းမပြုမီသိရှိထားပါ။ ဒါပေမယ့်သေချာတာပေါ့၊ အဲဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုသူဘယ်နေရာကပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။
iPhone ကိုပိတ်ထားရင်တောင်ရှာလို့ရမလား။ ဖြစ်နိုင်လျှင် iOS 13 ကိုအသုံးပြုပါ
"Find offline" ကိုဖွင့်ထားခြင်းကို iOS 13 နှင့်အထက်ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်သာရနိုင်သည်
ပထမတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသော operating system ၏ version ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ iOS 13 သည် iPhone 5s၊ iPhone6နှင့် iPhone6Plus နှင့်မကိုက်ညီပါဒီတော့သင့်မှာဒီကိရိယာတစ်ခုရှိရင်သင်အဲဒါကိုသုံးလို့မရပါဘူး။
iOS 13 ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည့်အခါ Apple သည် Find My Offline ဟုခေါ်သောအင်္ဂါရပ်အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် ၎င်းသည်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိပဲပိတ်ထားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့စက်၏တည်နေရာကိုအချိန်တိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် လုံးဝ၊ ၎င်းသည် GPS အချက်ပြမှုသို့မဟုတ် Wi-Fi ကွန်ယက်များသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကွန်ယက်များမှတြိဂံပြုမှုပေါ်တွင်မမူတည်သော်လည်း Bluetooth Low Energy (BLE) protocol ၏ရွေးချယ်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။
ဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ၅ နှစ်ကျော်စျေးကွက်ထဲတွင်ရှိသည့်ကြွေပြားများဟုခေါ်သောအပိုပစ္စည်းငယ်များတွင်ရရှိနိုင်သောအချိန်ကတည်းက iOS 13 ရှိအနည်းဆုံး devices နှစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ် iOS 13 ပါသော iPhone သို့မဟုတ် iPad နှင့် macOS Catalina ကစီမံခန့်ခွဲသော Mac တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ Apple စက်ရှိမှသာကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုရှာ။ မရပါ။
"Offline Find" မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
ကိရိယာနှစ်ခုလုံးကို configure လုပ်တဲ့အခါ၊ devices နှစ်ခုလုံးအကြားမျှဝေထားသော private keys များကိုထုတ်လုပ်ပါ စကားဝှက်ဆက်သွယ်ရေးမှတဆင့်။ ထို့နောက်အများသုံးသော့ချက်ကိုဖန်တီးပြီး beacon ဟုလည်းခေါ်သည်။ သင်၏ကိရိယာများကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအခြားအိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်ဒ်သို့မဟုတ် Mac စက်များသို့ Bluetooth မှတစ်ဆင့်ကူးစက်သောသုတ်ဆေးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ iPhone ခိုးယူခံရခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးယူခံရခြင်းဟာကံမကောင်းအကြောင်းမလှပါကသင့်ဖုန်းနားမှာဖြတ်သွားတဲ့အိုင်ဖုန်းအားလုံး သူတို့က signal ကိုလက်ခံပြီး device ရဲ့တည်နေရာကိုပေးလိမ့်မယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း Apple သည်တည်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်သုံးစွဲသူကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မှဝင်ရောက်ခွင့်မရရှိပါ ကူညီခဲ့သည် တည်နေရာကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ပါ။
ဤဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး အသုံးပြုသူမှာဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးပြီး ၄ င်း၏တည်နေရာကိုသိလိုပါကအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအဆင့်များအတိုင်းသာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » သင့် iPhone ၏နောက်ဆုံးတည်နေရာကိုမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း၊ ၎င်းသည်ဘက်ထရီကုန်သွားလျှင်ပင်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ၊ သင်၏ရေးသားချက်များအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သူတို့ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသော iPhone မှာရှိတဲ့ iPhone4ကကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာ။ 'Send last location' ကိုရွေးလို့မရပါ။ အခြားနည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိူင်ပါသလား (သို့) ၇.၁.၂ ထက်ပိုသော iOs များရှိစက်များအတွက်သာလား။
ဟစ်တာဗစ်တာ၊ မင်းငါ့ iPhone ကိုရှာမရဘူးလား။ iCloud ကိုအသုံးပြုပါသလား။
Marga Carrasco Esparza ဟုသူကပြောသည်
Marga Carrasco Esparza အားစာပြန်ပါ
မဟုတ်ပါ။ ပိတ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးတည်နေရာကိုသိနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းပြောင်းလဲသွားပါက 3G / 4G သို့မဟုတ် WiFi ကွန်ယက်သို့ပြန်မဖွင့်မီတည်နေရာအသစ်ကိုသိရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Renato ဖာနန်ဒက်ဇ S ဟုသူကပြောသည်
ပုံသေအားဖြင့် wi-fi ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်နေသမျှကာလပတ်လုံးပုံမှန်အတိုင်းနောက်ဆုံးတည်နေရာကိုပြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်
Renato Fernandez S ကိုစာပြန်ပါ
Fabiana Lemos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောညဖြစ်ပါစေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားဖြေကြားနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရှိမရဏာနိုင်ငံ၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းအခိုးခံရခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းကိုရှာရန်ကြိုးစားနေသော်လည်းကျွန်ုပ်၏သတင်းစကားကိုလွှင့်ပစ်သည်။ ဆက်သွယ်မှုမရှိ "နှင့်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးရရှိနိုင်သောတည်နေရာကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ သင်ဘာဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်သိပါလိမ့်မည်။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Fabiana Lemos ကိုပြန်သွားပါ
Javier Martinez ဟုသူကပြောသည်
ဒီ feature ကို iOS 8 သာရရှိနိုင်ပါသည်
ဒီလုပ်ဆောင်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါဆုံးရှုံးပြီးနောက် ၂ နာရီအကြာမှာကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ 🙂
ဘက်ထရီနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်အမှု၌ကျွန်ုပ်သည်တည်နေရာကိုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီး၊ အားသာချက်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တွင် iPhone6Plus ရှိပြီးဘက်ထရီသည်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အိမ်သို့ ၄၀% နှင့်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အိမ်သို့ပြန်ရောက်သည်။ ငါမွန်းတည့်အချိန်၌ 40s ရှိခဲ့ပါတယ်ငါနောက်တဖန်အားသွင်းခဲ့ရသည်
ငါ iPhone4ဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ သူတို့ကအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်လိုက်တယ်၊ ပိတ်လိုက်တယ်၊ သူတို့ကဖွင့်လိုက်ပြီလို့ငါ့ကိုပြောတယ်ဒါပေမယ့်တည်နေရာကိုမသိဘူး၊ သိဖို့နည်းလမ်းရှိလား ??
လျှောက်လွှာကို download လုပ်မထားပါကအလုပ်မလုပ်ပါ။
ငါဘယ်လိုလဲ၊ ငါ iPhone 4s ပျောက်သွားတယ်၊ ငါ့မှာ iCloud အကောင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကဘာမှမပိတ်ဘူး၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ ငါဆိုလိုတာကအဲဒါကိုသုံးနိုင်တယ်၊ ငါသိချင်တာကတော့အကယ်လို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသူကတည်နေရာကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ အသင်းဘယ်မှာလဲဆိုတာငါမသိတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲငါ့ကိုပုံပေါ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏ iphone 4s ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးတည်နေရာကိုပြန်လည်ပို့ပေးပြီးပါကမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ၎င်းကိုသိရန်နည်းလမ်းရှိသလားသို့မဟုတ်ပိတ်ထားပါကသင်မပြောနိုင်ပါသလော။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးပါ !!!!!!
သူငယ်ချင်းကောင်း၊ ငါ iPhone ပျောက်သွားတယ်၊ ဖုန်းကိုသူတို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကနေရာကိုပို့လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၂၄ နာရီလောက်သာငါရောင်ပြန်ဟပ်လိုက်တယ်၊ ၂၄ နာရီကျော်သွားပြီ။ စာကိုငါတွေ့ပြီ၊ ၂၄ နာရီပြီးသွားပြီ၊ အဲဒီတည်နေရာကိုပြန်တွေ့နိုင်မလား။
ကျွန်ုပ်၏ iphone6ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ iphone ကိုရှာဖွေရန် application ကိုအသက်သွင်းထားသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးတည်နေရာကိုမပြပါ
ကျွန်ုပ်၏ iPhone 6s သည်ကျွန်ုပ်၏နေအိမ်များမှယာယီလွှဲပြောင်းမှုတွင်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီး၎င်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်အသုံးပြုပါသည်။ (၂၅ ရက်မှ ၃၀ အကြာ) ၎င်းကိုလှူဒါန်းခြင်းမပြုပါ။ အိုင်ပက်ဒ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါက အဲဒါကအော့ဖ်လိုင်းဖြစ်တယ်၊ ငါ့ကိုပြန်ပေးဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ၊ အိမ်နှစ်ခုကိုဇောက်ထိုးလှည့်လိုက်တာနဲ့မပေါ်လာတာကြောင့်ဘက်ထရီကုန်သွားပြီ။
Victor garcia ဟုသူကပြောသည်
iCloud ကိုမဖွင့်ပါကကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ
ဗစ်တာ Garcia သို့စာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ iCloud အကောင့်ကိုမှတ်မိပြီး၎င်း၏နောက်ဆုံးတည်နေရာကိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုယနေ့အကြာတွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဘက်ထရီအားသွင်းစရာမလိုတော့ပါ။ သို့သော်အသေးစိတ်မှာကျွန်ုပ်တွင်ရှိလျှင် activated နောက်ဆုံးတည်နေရာပေးပို့ပါ ... ကသိရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone အခိုးခံရသော်လည်းကျွန်ုပ်ပယ်ဖျက်လိုသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်း (သို့) ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာများပေါ်တွင်၎င်းကိုရွေးရန်ကျွန်ုပ်အားမိန့်ခွန်းပြောသောစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အကူပြုသင်္ကေတတောင်းရန်ကျွန်ုပ်အားဤကုဒ်ကိုမည်သို့ရရှိမည်နည်း။ နှစ်ဆအချက်စစ်စစ်မှုနှင့်အတူတ
julian parra အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ မနေ့ကကျွန်ုပ်၏ iPhone ဆဲလ်ဖုန်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး၊ “ ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းကိုရှာပါ” ဆိုတဲ့ application ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲပေါ်လာပြီးငါခေါ်တယ်၊ ပိတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
Ana Sierra ဟုသူကပြောသည်
၄ ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ညမှာဖွင့်လိုက်တယ်၊ မနက်ခင်းမှာငါ icloud ကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်စက်ကမပေါ်လာတော့ဘူး။ သူတို့ကဖျက်ပစ်ခဲ့ကြပြီလား မက်ဆေ့ခ်ျပေါ်လာသောနောက်ဆုံးတည်နေရာကိုရှာရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား။
Ana Sierra ကိုစာပြန်ပါ
johannna osorio ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ i iphone ဆုံးရှုံးသွားသည်6ကျွန်ုပ် icloud စကားဝှက်ကိုမမှတ်မိပါ
johannna osorio အားပြန်ပြောပါ